အတ္တကြောင့် ကြွေလွင့်ခဲ့သော ပန်းလေးတစ်ပွင့် ...! - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစုံ / ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ / အတ္တကြောင့် ကြွေလွင့်ခဲ့သော ပန်းလေးတစ်ပွင့် ...!
အတ္တကြောင့် ကြွေလွင့်ခဲ့သော ပန်းလေးတစ်ပွင့် ...!
Apann Pyay 6:36 PM ဗဟုသုတအစုံ , ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ Edit
” ဆရာမ သမီး မခိုးပါဘူး ”
” သမီး မခိုးရင် ဒီစာအုပ်က ဘယ်လိုလုပ် သမီး လွယ်အိတ်ထဲ ရောက်နေတာလဲ ”
” ဒါတော့သမီးလည်း မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီစာအုပ်ကို တစ်ကယ် မခိုးခဲ့ပါဘူးရှင့် ။ ဘုရားပေးပေး ကျမ်းပေးပေးပါ ဆရာမရယ် သမီး မခိုးခဲ့ပါဘူး..ဟီး … ဟီး ,.. ဟီး ”
“ခုမှ ငိုပြ မနေနဲ့တော့။ အခုက လက်ပူးလက်ကြပ် သက်သေနဲ့တစ်ကွ မိတာ။ ရှင်းပြချက်ပေးချင်ရင် မနက်ဖြန် သမီးရဲ့ အုပ်ထိန်းသူခေါ်ပြီး ကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးပြောပေါ့ ။
ခုတော့ ဆရာမ စာသင်တော့မယ် ။ စာအုပ်ပိုင်ရှင်လည်း ပျောက်တဲ့ စာအုပ်ပြန်တွေ့ပြီဆိုတော့ ကျေနပ်လိုက်တော့ ။ အားလုံး မှတ်ထားကြပါ သူတစ်ပါးပစ္စည်း ခိုးရင် ငရဲရောက်တာနောက်မှ လက်ရှိ အချိန်မှာ ခုလို ဖမ်းမိ သွားရင် အရှက်ကွဲပြီး နှစ်ခါပြန်သေနေရတာ အတူတူပဲ။ အကျင့်ပျက်တယ် ဆိုတာ ဆရာမအတန်းထဲမှာ မရှိစေရဘူး။ ကဲ – စာသင်ရအောင် စာမျက်နှာ ၅၉ ကိုလှန် အားလုံးမြန်မြန်လုပ်ကြ ”
” ဟုတ်ကဲ့ ဆရာမ ”
ဒီနေ့ ကျွန်မ အတန်းတွင် စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာ ကိစ္စများက စောင့်ကြိုနေသည်။ တစ်နေ့တာရဲ့ စာသင်ချိန်းတစ် ဝက် ကုန်ဆုံးပြီး အားလပ်ချိန် ဆင်းပြီးနောက် စာသင်ခန်းထဲပြန်ဝင်ချိန်တွင် ကျွန်မ အတန်းထဲက ကျောင်းသူလေး တစ်ယောက် ငိုယိုပြီး စာအုပ်ပျောက် လာတိုင်သည်။
ကျွန်မ ကိုင်တွယ်နေသည့် အတန်းသည် ခြောက်တန်း ! တန်းခွဲ အားလုံးထဲတွင် အတော်ဆုံး အတန်းဖြစ်နေ ရမည်။ စာရိတ္တကောင်းသော ယဉ်ကျေး လိမ္မာသော စာတော်သော စည်းကမ်းရှိသော ဟူသည့် စံနမူနာများဖြင့် ပြည့်နေရမည်။ ကျွန်မလိုချင်သော ပုံစံခွက် အတိုင်း အတန်းထဲက ကလေးအားလုံးကို ပုံသွင်းထား သည်။
ဒါကြောင့် ကျွန်မ အနုနည်း အကြမ်းနည်း နည်းပေါင်းများစွာ သုံးခဲ့ရသည်။ ထိုကြောင့် ကျောင်းသူ/ သား များကြားတွင် နာမည်ကျော်ကြားလေသည် ။
ဆရာမ ဒေါ်ဂျမ်းပုံ သည် ကျွန်မ ၏ နာမည်အရင်း မဟုတ်သော်လည်း တိုးတိုးနှင့်ကြားနေရသော ကျွန်မ၏ နာမည်ပြောင်ပင်။ စိတ်ဓာတ် စည်းကမ်း ပညာအရာတွင် ထိပ်ဆုံးဖြစ်လိုသော ကျွန်မ အတန်း၏ တိုင်တန်းမှုသည် ခိုးမှု။ ကျွန်မ အတန်းတွင် ဆိုဆုံးမ၍ မရသော ကျောင်းသူ/သားများ လုံးဝ မလိုပါ။ သေချာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည် ။
စာအုပ်ပျောက် လာတိုင်သော ကျောင်းသူလေးသည် မျက်ရည် ကျလျက် ပျောက်သွားသော စာအုပ် သည် နိူင်ငံခြားရောက်နေသော အကိုဖြစ်သူက လက်ဆောင်ပေးထားသည့် စာအုပ်ဖြစ်ကြောင်း ငိုရင်းနဲ့ပြောပြ သည် ။
သူမ တန်ဖိုးထားရသော စာအုပ်ဖြစ်သည့်အတွက် ပြန်လိုချင်ကြောင်း ထပ်ပြောသည်။ ဒါကြောင့် အကျင့် ပျက်သော စာအုပ် သူခိုးကိုလည်း ကျွန်မ ဒီအတိုင်း လွှတ်မထားနိူင်ပါ။ အကျင့်ပြင်တန်ပြင် မပြင်ပါက အုပ်ထိန်းသူခေါ်ခိုင်းပြီး ကျောင်းအုပ်ရုံးခန်းသို့ ပို့ရမည် ။
တစ်ခန်းလုံး လွယ်အိတ်တွေကို စာရေးခုံပေါ်တွင် တင်ခိုင်းလိုက်လေသည်။ စာအုပ်ပျောက်သော ကျောင်းသူအား တစ်ယောက်ချင်း၏ လွယ်အိတ်တွေကို လိုက်လံ စစ်ဆေးခိုင်းလေသည် ။
ကျောင်းသူလေးသည် လွယ်အိတ် တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး စစ်ဆေးပြီးနောက် အရှေ့တန်း ၅ ခုံမြောက်တွင် စာအုပ်ပျောက်ရှာဖွေခြင်း ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။ ပန်းနုရောင် စာအုပ်လေးကို ကိုင်တွယ်ပြီး ထွက်လာသည်။ ကြား ရသည့် ကိုယ့်နားကိုပင် မယုံနိူင်ပါ။ ဒီ စာအုပ်အား ” နှင်းနွယ်အောင် ” လွယ်အိတ်မှ တွေ့ခဲ့သည်လို့ ပြောပါသည် ။
ထိုကျောင်းသူသည် ကျွန်မ အတန်းထဲတွင် အတော်ဆုံး အအေးဆုံး အလိမ္မာဆုံး ကျောင်းသူဖြစ်သည် ။ သူမတွင် မိဘများ မရှိတော့ဟု မိဘမဲ့ မိန်းခလေး သီးသန့်ကျောင်းက ဆရာမကြီးက ကျောင်းလာအပ်ကတည်းက ပြောပြခဲ့သည် ။
ထို မိဘမဲ့ကျောင်းက ဆရာမကြီး ကိုယ်တိုင်ကလည်း စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေးဝါဒ ကို လက်ကိုင်စွဲထားသူတစ်ဦးပင်။ ဘာအတွက်ကြောင့် ဒီကလေးမ အကျင့်ပျက်ရသည့်ကို မတွေးတတ်ပါ ။
ကျွန်မမေးတိုင်း ” ဒီစာအုပ် သမီးမခိုးပါဘူး ” အကြိမ်ကြိမ် ထွက်ဆိုနေသဖြင့် စိတ်လည်းတိုလာသည်။ ခိုး သည့် အပြင် ဝန်မခံတတ်သော လူမျိုးသည် အကျင့်မကောင်းသော သူများဖြစ်သည်။ ကျွန်မနောက်ဆုံး Warning အနေဖြင့် သူမ အုပ်ထိန်းသူကို ကျောင်းအုပ်ကြီးဆီ ခေါ်လာခိုင်းပါသည် ။
” ဆရာကြီး ။ ကျောင်းသူတစ်ယောက် ကျောင်းပေါ်က ခုန်ချလို့။ အလံတိုင်နားလေးမှာ သွေးတွေလည်း အိုင်လို့ဗျ ”
ကျောင်းစောင့်ကြီးရဲ့အသံသည် အစည်းဝေး လုပ်နေသော ခန်းမကြီးကို လွှမ်းသွားသည် ။
မနက်ပိုင်းကျောင်းလွတ်ချိန်ပြီး၍ ကျောင်းအုပ်ကြီးက အစည်းဝေးခေါ်တာကြောင့် ဆရာ/မ အားလုံးလည်းစုံနေသော အစည်းဝေးခန်းထဲတွင် အာမေဋိတ်များ သံပြိုင် ကိုယ်စီနှင့် ဝရုန်းသုန်းကား အပြင်ပြေးထွက်တော့သည်။ ကျွန်မလည်း ရင် ထိတ်ထိတ်ပျာပျာဖြင့် ဆရာအုပ်ကြီးကြား တိုးဝှေ့ကြည့်လိုက်သည် ။
သွေးအိုင်ထဲတွင် ကျောင်းဝတ်စုံတို့ အရောင်ပြောင်းကုန်ပြီးဖြစ်သော ကျွန်မ အတန်းထဲကကျောင်းသူလေးသည် သွေးစွန်းနေသော စက္ကူလေးကို လက်ထဲတွင် ကျစ်ကျစ် ပါအောင် ဆုပ်ကိုင်ပြီး သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရတော့ ကျွန်မသွေးများ ပြောင်းပြန်စီးသလို ခံစားရပြီး မိုက်ခနဲဖြစ်သွားသည်။ ကျွန်မယူကြုံးမရဖြစ်ခါ အော်ငိုချမိသည် ။
ကျွန်မ စိုက်ပျိုးခဲ့သော ပန်းလေးတစ်ပွင့် ရုတ်တရက် ကြွေလွှင့်သွားပါလား။ ကျွန်မ ဆိုသော အတ္တ ဒီဆရာမသည် စည်းကမ်းသေသပ်သည် ဟူသော ကျွန်မ သတ်မှတ်ထားသည့်ခေါင်းစဉ်များအောက်တွင် ရိုးသားဖြူ စင်သော ကျောင်းသူလေး တစ်ယောက်၏ ဘဝ တစ်ခု ပျက်သုဉ်းသွားစေခဲ့သည် ။
ကျောင်းသူလေး၏ နောက်ဆုံးစာဟု ထင်ရသော ညာဘက်လက်ထဲက စာရွက် ညစ်ညစ်လေးကို အသာအယာ ယူပြီး ဖြေထုတ် ဖတ်ကြည့်လိုက်သည်။ မျက်ရည်ပေါင်းများစွာက တစိမ့်စိမ့် ယိုစီးလာသည်။ အချိန်မတန်ဘဲ မရင့်ကျက်သေးဘဲ သေဆုံးသွားသော ကျောင်းသူလေး လက်ထဲက စာသည် ကျွန်မအတွက် ယူကြုံးမရသော နှုတ်ဆက်စာဖြစ်လာခဲ့သည် ။
” ဆရာမရှင့် ”
” တပည့်မိုက် တစ်ယောက်ကို ခွင့်မလွှတ်ပါနဲ့ ။ ဆရာမနှင့် ကျောင်းရှိ ဆရာ/ မ များအားလုံးအပေါ် သမီးကံငါးပါးနှင့် ပြစ်မှားမိခဲ့တာရှိသော် သမီးကို အားလုံး ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ။သမီး နောက်ဆုံးအကြိမ်ထိ ရိုးသားခဲ့တာကြောင့် ဒီစာအုပ်လေးကို လုံးဝ မခိုးပါဘူးလို့ ဝန်ခံပါရစေ ။
သမီး ငယ်ငယ် ကတည်းက မိဘ မရှိခဲ့တာကြောင့် ဆရာမက သမီးကို အကျင့်ပျက်သူလို့ ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်။ သမီးဟာ မိဘမဲ့ဂေဟာ စရောက်ကတည်းက ဆရာမကြီးရဲ့ လမ်းညွှန်မှုအောက်မှာ နာခံခဲ့ပြီး စာရိတ္တလည်း လုံးဝမဖောက်ပြားခဲ့ပါဘူး။ ကျောင်းတက်နေတဲ့ ကာလ တစ်လျှောက်လုံးလည်း သူများရဲ့ ခဲတံတိုလေး တစ်ချောင်းတောင်မှ မခိုးခဲ့ဖူးပါဘူး ။
ဒီနေ့ ဆရာမ စွပ်စွဲခံရတာ အရမ်း နာကျင် ခံစားရပါတယ်။ ဆရာမ အတန်းထဲက ထွက်သွားတော့ တစ်ခန်းလုံးက သမီးကို ( Stolen student ) လို့ လှောင်ကြတယ်။ သမီး အရမ်းရှက်တာပဲ ဆရာမရယ်။ သမီးလေ ဒီလို စွပ်စွဲရတာလည်း အတိတ်ဘဝက ဝဋ်ကြွေးကြောင့်ထင်ပါတယ် ။
သူတို့ကိုလည်း ပြောပေးပါ သမီးလုံးဝ မခိုးခဲ့ဘူးဆိုတာကို သမီးအသက်နဲ့ရင်းပြီး သက်သေပြခဲ့ပါတယ်လို့။ သမီးရဲ့ မိဘမဲ့ဂေဟာက ဆရာမကြီးကိုလည်းပြောပေးပါ သမီးကြောင့် ဆရာမကြီး ခုလို အရှက်ကွဲ မခံစေ ချင်လို့ စိတ်မပူစေချင်လို့ သမီးရဲ့ကိစ္စကို သမီးရှင်းအောင် လုပ်သွားခဲ့ပါတယ် ။
ဆရာမရဲ့ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ စည်းကမ်းတွေအောက်မှာ အမည်းစက် ထင်ခဲ့တဲ့ သမီးရဲ့ အပြစ် ကိုလည်း ဖျက်ပေး ပါနော်။ သမီးရဲ့ ဖြူစင်ရိုးသားမှုကို နောက်ဆုံး အနေနဲ့ သက်သေပြလိုက်ပါတယ်။ သမီး ဒီလို မလုပ် သင့်ပေမယ့် ကြံမိ ကြံရာ လုပ်ခဲ့လို့ ဒီစာကို ဖတ်နေတဲ့ ဆရာမကိုလည်း ခွင့်လွှတ်ပါလို့ သမီးမတောင်းဆိုတော့ပါဘူး ။
သမီးလေ အရမ်းကြောက်တယ် ဆရာမရယ်။ ဒီစာကိုရေးနေတဲ့အချိန်မှာရော ခုန်ချတော့မယ့် အချိန်မှာရော သမီး ကို တားမယ့်သူ သမီးနားမှာ တစ်ယောက်မှ မရှိကြဘူး။ သမီး မသေချင်သေးဘူး ဆရာမရယ် … ”
စာဖတ်ပြီး ကျမရဲ့ နှလုံးအိမ်တို့ အရည်ပျော်ကုန်ခဲ့ရသည်။ နှလုံးသား မရှိသော ကျမ စည်းကမ်းကို ရှေ့တန်းတင်ခဲ့သော ကျမ ဂုဏ်ပုဒ် သိက္ခာတွေ ရစေဖို့အတွက် ပြဿနာဖြေရှင်းမှု ညံ့ဖျင်းခဲ့သော ကျမ စာလေး တစ်စောင်ကြောင့် နှလုံးသားကွဲကြေရပါပြီ ။
ဖြူစင်ရိုးသားသော ကလေးကိုမှ သူခိုးဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဒဏ်ရာများနဲ့ အတောင်ကျိုးနေသော ငှက်ကလေးကိုမှ ရိုက်သတ်မိခဲ့သည်။ ကျွန်မအား ဆရာမလို့ခေါ်ထိုက်စရာ တစ်ကွက်မှ မရှိတော့ပါ။သွေးစွန်းနေသော စာရွက်လေးကို တင်းတင်းဆုတ်ကိုင်ထားနေစဉ် ကျွန်မဘေးနားကို တိုးတိုးလေးကပ် လာပြောသယောင် ” သမီးကို ခွင့်မလွှတ်ပါနဲ့ သမီးမသေချင်သေးဘူး ဆရာမရယ် ” ဟူသော အသံတွေက ဆူညံပွတ်လောက်ရိုက်နေပြီး ကျောင်းသူလေးကို မျက်လုံးထဲ မြင်ယောင်ကာ ကတ္တရားလမ်းပေါ်တွင် ကျွန်မလဲကျသွားလေသည်။
” ဆရာမ သမီးမသေချင်သေးဘူး ဆရာမရယ် ။ သမီးစာအုပ်ကို လုံးဝ မခိုးပါဘူး ။ သမီးကြောက်တယ်။ သမီးဘယ်နေရာရောက်နေမှန်းမသိဘူး မှောင်မဲနေတာဘဲ။ ”
” သမီးရေ ဆရာမကို ခွင့်မလွှတ်ပါနဲ့ကွယ်။ ဆရာမ စည်းကမ်းချက်တွေကို ရှေ့တန်း တင်ခဲ့မိတဲ့ အမှားကြောင့် သမီးကို ဘဝခြားသွားစေခဲ့ပြီ။ ဆရာမ မှားပါပြီကွယ် ။ နောက်ဘဝဆိုတာ ရှိခဲ့ရင် ဆရာမဆီပြန်လာခဲ့ပါ သမီးကျေနပ်လောက်တဲ့အထိ ဒူးထောက်ပြီး တောင်းပန်ပါ့မယ်။”
” ဆရာမ -သမီးကို ကတိတစ်ခု ပေးပါ ။ ဆရာမ စာဆက်သင်ပါအုံးမယ်လို့ ။ ပန်းကလေးတွေကို သမီးလို အလေအလွှင့်မရှိပဲ ပြုစုပျိုးထောင်ပါ့မယ်လို့ ကတိပေးပါ။ ဆရာမ ကတိပေးရင် သမီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ ခရီးဆက်တော့မယ်။ ဆရာမ သမီးကို ကတိပေးမယ်မလား ”
” ပေးပါတယ် သမီးရယ် ”
“သမီးသွားတော့မယ် နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် ဆရာမရယ် ”
” သမီး… သမီး … သမီးလေး ”
ကျွန်မအော်ရင်း လန့်နိူးလာခဲ့သည်။ အိမ်မက်ထဲတွင် သေသွားသောကျောင်းသူလေးသည် ကျောင်းဝတ်စုံလေးနှင့်နောက်ဆုံး အချိန်ထိ ကျွန်မ ကို ခွန်အား သတ္တိတွေ လာပေးသွားသည် ။
မောဟိုက်စွာ တစ်ဒိတ်ဒိတ် ခုန်နေသော နှလုံးတို့သည် အမေပေးသော ရေတစ်ခွက်ကို သောက်ပြီး ခဏငြိမ်နေတော့သည်။ အခုတော့ ဘဝသစ်ကို ပြန်စမည် ခြေလှမ်းသစ်တိုင်းတွင် လက်ထဲက သွေးစွန်းနေတဲ့စာရွက်လေးက အားအင် ပြုပေးနေတော့သည် ။
” ဒို့ကျောင်း ”
ငါတို့ စာသင်ကျောင်း ”
ကလေးများ သံပြိုင်ရွတ်ဆိုသော ကဗျာလေးသည် နံနက်ခင်းတွင် ပီပြင်စွာတေးဆိုနေသော ငှက်ကလေးများနှယ်။ ကျွန်မ ပြုံးပျော်နေသည် ။ ရွာတစ်ရွာ၏ မူလတန်းစာသင်တန်းကျောင်းတွင် ပြောင်းရွေ့ တာဝန်ချခံရသော်လည်း ကျွန်မ ထူးပြီး စောဒက တတ်မနေတော့ပါ။
အခုဆို ကျွန်မဘောင်မခေတ်ပဲ ပန်းကလေးတွေ ပျိုးတတ်လာပြီ။ ကလေးတွေရဲ့ အပြုံးကို စားသုံးရင်း တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ်ကျော်လွန် လာခဲ့သည်မှာ သုံးနှစ်တိုင်ပြည့်တော့မည်။ စိတ်တွေလည်း အတော်ပင်တည်ငြိမ်ခဲ့သည်။သုံးနှစ်ကြာခဲ့ပြီ ဆိုသော်လည်း အတိတ်က ကြွေလွှင့်ခဲ့သော ပန်းလေးအကြောင်းတွေးမိတိုင်း တစ်ဖန်ပူနွေးလာစမြဲ ။
ကျောင်းမပြောင်းရွေ့ရခင် နောက်ဆုံးသင်ခဲ့ရသည့်နေ့တွင် စာအုပ်ပျောက်လာတိုင်သော ကျောင်းသူလေးက သူ့အပြစ်ကို လာဝန်ခံခဲ့သည်။ သူမရဲ့ မနာလိုစိတ်ကြောင့် သေခဲ့ရသည်ဟု ရှိုက်ငိုရင်း ပြောရှာပါသည်။ အတန်းထဲတွင် လတိုင်း အဆင့် ၁ ရသော နှင်းနွယ်အောင် ကိုကြည့်မရလို့ မုန့်စားဆင်းချိန်တွင် နှင်းနွယ်အောင် လွယ်အိတ်ထဲတွင် သူမကိုယ်တိုင် သွာထည့်ထားပြီး လုပ်ကြံခဲ့တာဟု ဝန်ခံခဲ့သည်။
ထောင်းထာင်း ကြေနေသောစိတ်နှင့်သာ အပြစ်လုပ်သော ကလေးမကို ကျောင်းစည်းမျဉ်း အရ ကျောင်းထုတ် လိုက်ပါသည်။ ကျွန်မလည်း ထိုကျောင်းနှင့်ဝေးရာကို ဇာတ်မြှုပ်နေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ အခုဆို ကျွန်မပျိုးထားသော ပန်းပွင့်ငုံလေးများ လန်းဆန်းလျှက် ရှင်သန်နေပါတယ်။ ကျွန်မ ရဲ့ အတွေးတွေ ဖြန့်ကျက်နေစဉ်တွင်…
” ဆရာမ ”
” သားကို ဘုန်းဘုန်းပေးထားတဲ့ စာအုပ်
သာဂိ ခိုးထားတယ်။ ”
ကျွန်မ အာရုံတွေ စုစည်းလိုက်သည်။ ကျွန်မ ဒီတစ်ခါ ကိုင်တွယ်မှု မမှားချင်တော့ပါ။ လွန်ခဲ့သော နှစ်နှစ်ကျော်လောက်က သေဆုံးသွားသောကျောင်းသူလေးအား ဖျတ်ခနဲ သတိရလိုက်သည်။
ဒိုင်ယာရီ စာအုပ်ကြားက သွေးစွန်းနေသော စာရွက်လေးကို ဖွင့်ကြည့်ရင်း..။
Via Ashin Taejavanta
Credit: ပျူမခ (ကော့သောင်း)
” သမီး မခိုးရငျ ဒီစာအုပျက ဘယျလိုလုပျ သမီး လှယျအိတျထဲ ရောကျနတောလဲ ”
” ဒါတော့သမီးလညျး မသိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဒီစာအုပျကို တဈကယျ မခိုးခဲ့ပါဘူးရှငျ့ ။ ဘုရားပေးပေး ကမျြးပေးပေးပါ ဆရာမရယျ သမီး မခိုးခဲ့ပါဘူး..ဟီး … ဟီး ,.. ဟီး ”
“ခုမှ ငိုပွ မနနေဲ့တော့။ အခုက လကျပူးလကျကွပျ သကျသနေဲ့တဈကှ မိတာ။ ရှငျးပွခကျြပေးခငျြရငျ မနကျဖွနျ သမီးရဲ့ အုပျထိနျးသူချေါပွီး ကြောငျးအုပျကွီးနဲ့တှပွေီ့းပွောပေါ့ ။
ခုတော့ ဆရာမ စာသငျတော့မယျ ။ စာအုပျပိုငျရှငျလညျး ပြောကျတဲ့ စာအုပျပွနျတှပွေီ့ဆိုတော့ ကနြေပျလိုကျတော့ ။ အားလုံး မှတျထားကွပါ သူတဈပါးပစ်စညျး ခိုးရငျ ငရဲရောကျတာနောကျမှ လကျရှိ အခြိနျမှာ ခုလို ဖမျးမိ သှားရငျ အရှကျကှဲပွီး နှဈခါပွနျသနေရေတာ အတူတူပဲ။ အကငျြ့ပကျြတယျ ဆိုတာ ဆရာမအတနျးထဲမှာ မရှိစရေဘူး။ ကဲ – စာသငျရအောငျ စာမကျြနှာ ၅၉ ကိုလှနျ အားလုံးမွနျမွနျလုပျကွ ”
” ဟုတျကဲ့ ဆရာမ ”
ဒီနေ့ ကြှနျမ အတနျးတှငျ စိတျပကျြဖှယျရာ ကိစ်စမြားက စောငျ့ကွိုနသေညျ။ တဈနတေ့ာရဲ့ စာသငျခြိနျးတဈ ဝကျ ကုနျဆုံးပွီး အားလပျခြိနျ ဆငျးပွီးနောကျ စာသငျခနျးထဲပွနျဝငျခြိနျတှငျ ကြှနျမ အတနျးထဲက ကြောငျးသူလေး တဈယောကျ ငိုယိုပွီး စာအုပျပြောကျ လာတိုငျသညျ။
ကြှနျမ ကိုငျတှယျနသေညျ့ အတနျးသညျ ခွောကျတနျး ! တနျးခှဲ အားလုံးထဲတှငျ အတျောဆုံး အတနျးဖွဈနေ ရမညျ။ စာရိတ်တကောငျးသော ယဉျကြေး လိမ်မာသော စာတျောသော စညျးကမျးရှိသော ဟူသညျ့ စံနမူနာမြားဖွငျ့ ပွညျ့နရေမညျ။ ကြှနျမလိုခငျြသော ပုံစံခှကျ အတိုငျး အတနျးထဲက ကလေးအားလုံးကို ပုံသှငျးထား သညျ။
ဒါကွောငျ့ ကြှနျမ အနုနညျး အကွမျးနညျး နညျးပေါငျးမြားစှာ သုံးခဲ့ရသညျ။ ထိုကွောငျ့ ကြောငျးသူ/ သား မြားကွားတှငျ နာမညျကြျောကွားလသေညျ ။
ဆရာမ ဒျေါဂမျြးပုံ သညျ ကြှနျမ ၏ နာမညျအရငျး မဟုတျသျောလညျး တိုးတိုးနှငျ့ကွားနရေသော ကြှနျမ၏ နာမညျပွောငျပငျ။ စိတျဓာတျ စညျးကမျး ပညာအရာတှငျ ထိပျဆုံးဖွဈလိုသော ကြှနျမ အတနျး၏ တိုငျတနျးမှုသညျ ခိုးမှု။ ကြှနျမ အတနျးတှငျ ဆိုဆုံးမ၍ မရသော ကြောငျးသူ/သားမြား လုံးဝ မလိုပါ။ သခြော ကိုငျတှယျဖွရှေငျးရမညျ ။
စာအုပျပြောကျ လာတိုငျသော ကြောငျးသူလေးသညျ မကျြရညျ ကလြကျြ ပြောကျသှားသော စာအုပျ သညျ နိူငျငံခွားရောကျနသေော အကိုဖွဈသူက လကျဆောငျပေးထားသညျ့ စာအုပျဖွဈကွောငျး ငိုရငျးနဲ့ပွောပွ သညျ ။
သူမ တနျဖိုးထားရသော စာအုပျဖွဈသညျ့အတှကျ ပွနျလိုခငျြကွောငျး ထပျပွောသညျ။ ဒါကွောငျ့ အကငျြ့ ပကျြသော စာအုပျ သူခိုးကိုလညျး ကြှနျမ ဒီအတိုငျး လှတျမထားနိူငျပါ။ အကငျြ့ပွငျတနျပွငျ မပွငျပါက အုပျထိနျးသူချေါခိုငျးပွီး ကြောငျးအုပျရုံးခနျးသို့ ပို့ရမညျ ။
တဈခနျးလုံး လှယျအိတျတှကေို စာရေးခုံပျေါတှငျ တငျခိုငျးလိုကျလသေညျ။ စာအုပျပြောကျသော ကြောငျးသူအား တဈယောကျခငျြး၏ လှယျအိတျတှကေို လိုကျလံ စဈဆေးခိုငျးလသေညျ ။
ကြောငျးသူလေးသညျ လှယျအိတျ တဈလုံးပွီး တဈလုံး စဈဆေးပွီးနောကျ အရှတေ့နျး ၅ ခုံမွောကျတှငျ စာအုပျပြောကျရှာဖှခွေငျး ရပျဆိုငျးလိုကျသညျ။ ပနျးနုရောငျ စာအုပျလေးကို ကိုငျတှယျပွီး ထှကျလာသညျ။ ကွား ရသညျ့ ကိုယျ့နားကိုပငျ မယုံနိူငျပါ။ ဒီ စာအုပျအား ” နှငျးနှယျအောငျ ” လှယျအိတျမှ တှခေဲ့သညျလို့ ပွောပါသညျ ။
ထိုကြောငျးသူသညျ ကြှနျမ အတနျးထဲတှငျ အတျောဆုံး အအေးဆုံး အလိမ်မာဆုံး ကြောငျးသူဖွဈသညျ ။ သူမတှငျ မိဘမြား မရှိတော့ဟု မိဘမဲ့ မိနျးခလေး သီးသနျ့ကြောငျးက ဆရာမကွီးက ကြောငျးလာအပျကတညျးက ပွောပွခဲ့သညျ ။
ထို မိဘမဲ့ကြောငျးက ဆရာမကွီး ကိုယျတိုငျကလညျး စညျးကမျး ထိနျးသိမျးရေးဝါဒ ကို လကျကိုငျစှဲထားသူတဈဦးပငျ။ ဘာအတှကျကွောငျ့ ဒီကလေးမ အကငျြ့ပကျြရသညျ့ကို မတှေးတတျပါ ။
ကြှနျမမေးတိုငျး ” ဒီစာအုပျ သမီးမခိုးပါဘူး ” အကွိမျကွိမျ ထှကျဆိုနသေဖွငျ့ စိတျလညျးတိုလာသညျ။ ခိုး သညျ့ အပွငျ ဝနျမခံတတျသော လူမြိုးသညျ အကငျြ့မကောငျးသော သူမြားဖွဈသညျ။ ကြှနျမနောကျဆုံး Warning အနဖွေငျ့ သူမ အုပျထိနျးသူကို ကြောငျးအုပျကွီးဆီ ချေါလာခိုငျးပါသညျ ။
” ဆရာကွီး ။ ကြောငျးသူတဈယောကျ ကြောငျးပျေါက ခုနျခလြို့။ အလံတိုငျနားလေးမှာ သှေးတှလေညျး အိုငျလို့ဗြ ”
ကြောငျးစောငျ့ကွီးရဲ့အသံသညျ အစညျးဝေး လုပျနသေော ခနျးမကွီးကို လှမျးသှားသညျ ။
မနကျပိုငျးကြောငျးလှတျခြိနျပွီး၍ ကြောငျးအုပျကွီးက အစညျးဝေးချေါတာကွောငျ့ ဆရာ/မ အားလုံးလညျးစုံနသေော အစညျးဝေးခနျးထဲတှငျ အာမဋေိတျမြား သံပွိုငျ ကိုယျစီနှငျ့ ဝရုနျးသုနျးကား အပွငျပွေးထှကျတော့သညျ။ ကြှနျမလညျး ရငျ ထိတျထိတျပြာပြာဖွငျ့ ဆရာအုပျကွီးကွား တိုးဝှကွေ့ညျ့လိုကျသညျ ။
သှေးအိုငျထဲတှငျ ကြောငျးဝတျစုံတို့ အရောငျပွောငျးကုနျပွီးဖွဈသော ကြှနျမ အတနျးထဲကကြောငျးသူလေးသညျ သှေးစှနျးနသေော စက်ကူလေးကို လကျထဲတှငျ ကဈြကဈြ ပါအောငျ ဆုပျကိုငျပွီး သဆေုံးနသေညျကို တှလေို့ကျရတော့ ကြှနျမသှေးမြား ပွောငျးပွနျစီးသလို ခံစားရပွီး မိုကျခနဲဖွဈသှားသညျ။ ကြှနျမယူကွုံးမရဖွဈခါ အျောငိုခမြိသညျ ။
ကြှနျမ စိုကျပြိုးခဲ့သော ပနျးလေးတဈပှငျ့ ရုတျတရကျ ကွှလှေငျ့သှားပါလား။ ကြှနျမ ဆိုသော အတ်တ ဒီဆရာမသညျ စညျးကမျးသသေပျသညျ ဟူသော ကြှနျမ သတျမှတျထားသညျ့ခေါငျးစဉျမြားအောကျတှငျ ရိုးသားဖွူ စငျသော ကြောငျးသူလေး တဈယောကျ၏ ဘဝ တဈခု ပကျြသုဉျးသှားစခေဲ့သညျ ။
ကြောငျးသူလေး၏ နောကျဆုံးစာဟု ထငျရသော ညာဘကျလကျထဲက စာရှကျ ညဈညဈလေးကို အသာအယာ ယူပွီး ဖွထေုတျ ဖတျကွညျ့လိုကျသညျ။ မကျြရညျပေါငျးမြားစှာက တစိမျ့စိမျ့ ယိုစီးလာသညျ။ အခြိနျမတနျဘဲ မရငျ့ကကျြသေးဘဲ သဆေုံးသှားသော ကြောငျးသူလေး လကျထဲက စာသညျ ကြှနျမအတှကျ ယူကွုံးမရသော နှုတျဆကျစာဖွဈလာခဲ့သညျ ။
” ဆရာမရှငျ့ ”
” တပညျ့မိုကျ တဈယောကျကို ခှငျ့မလှတျပါနဲ့ ။ ဆရာမနှငျ့ ကြောငျးရှိ ဆရာ/ မ မြားအားလုံးအပျေါ သမီးကံငါးပါးနှငျ့ ပွဈမှားမိခဲ့တာရှိသျော သမီးကို အားလုံး ခှငျ့လှတျပေးကွပါ။သမီး နောကျဆုံးအကွိမျထိ ရိုးသားခဲ့တာကွောငျ့ ဒီစာအုပျလေးကို လုံးဝ မခိုးပါဘူးလို့ ဝနျခံပါရစေ ။
သမီး ငယျငယျ ကတညျးက မိဘ မရှိခဲ့တာကွောငျ့ ဆရာမက သမီးကို အကငျြ့ပကျြသူလို့ ထငျကောငျးထငျပါလိမျ့မယျ။ သမီးဟာ မိဘမဲ့ဂဟော စရောကျကတညျးက ဆရာမကွီးရဲ့ လမျးညှနျမှုအောကျမှာ နာခံခဲ့ပွီး စာရိတ်တလညျး လုံးဝမဖောကျပွားခဲ့ပါဘူး။ ကြောငျးတကျနတေဲ့ ကာလ တဈလြှောကျလုံးလညျး သူမြားရဲ့ ခဲတံတိုလေး တဈခြောငျးတောငျမှ မခိုးခဲ့ဖူးပါဘူး ။
ဒီနေ့ ဆရာမ စှပျစှဲခံရတာ အရမျး နာကငျြ ခံစားရပါတယျ။ ဆရာမ အတနျးထဲက ထှကျသှားတော့ တဈခနျးလုံးက သမီးကို ( Stolen student ) လို့ လှောငျကွတယျ။ သမီး အရမျးရှကျတာပဲ ဆရာမရယျ။ သမီးလေ ဒီလို စှပျစှဲရတာလညျး အတိတျဘဝက ဝဋျကွှေးကွောငျ့ထငျပါတယျ ။
သူတို့ကိုလညျး ပွောပေးပါ သမီးလုံးဝ မခိုးခဲ့ဘူးဆိုတာကို သမီးအသကျနဲ့ရငျးပွီး သကျသပွေခဲ့ပါတယျလို့။ သမီးရဲ့ မိဘမဲ့ဂဟောက ဆရာမကွီးကိုလညျးပွောပေးပါ သမီးကွောငျ့ ဆရာမကွီး ခုလို အရှကျကှဲ မခံစေ ခငျြလို့ စိတျမပူစခေငျြလို့ သမီးရဲ့ကိစ်စကို သမီးရှငျးအောငျ လုပျသှားခဲ့ပါတယျ ။
ဆရာမရဲ့ ပွဋ်ဌာနျးထားတဲ့ စညျးကမျးတှအေောကျမှာ အမညျးစကျ ထငျခဲ့တဲ့ သမီးရဲ့ အပွဈ ကိုလညျး ဖကျြပေး ပါနျော။ သမီးရဲ့ ဖွူစငျရိုးသားမှုကို နောကျဆုံး အနနေဲ့ သကျသပွေလိုကျပါတယျ။ သမီး ဒီလို မလုပျ သငျ့ပမေယျ့ ကွံမိ ကွံရာ လုပျခဲ့လို့ ဒီစာကို ဖတျနတေဲ့ ဆရာမကိုလညျး ခှငျ့လှတျပါလို့ သမီးမတောငျးဆိုတော့ပါဘူး ။
သမီးလေ အရမျးကွောကျတယျ ဆရာမရယျ။ ဒီစာကိုရေးနတေဲ့အခြိနျမှာရော ခုနျခတြော့မယျ့ အခြိနျမှာရော သမီး ကို တားမယျ့သူ သမီးနားမှာ တဈယောကျမှ မရှိကွဘူး။ သမီး မသခေငျြသေးဘူး ဆရာမရယျ … ”
စာဖတျပွီး ကမြရဲ့ နှလုံးအိမျတို့ အရညျပြျောကုနျခဲ့ရသညျ။ နှလုံးသား မရှိသော ကမြ စညျးကမျးကို ရှတေ့နျးတငျခဲ့သော ကမြ ဂုဏျပုဒျ သိက်ခာတှေ ရစဖေို့အတှကျ ပွဿနာဖွရှေငျးမှု ညံ့ဖငျြးခဲ့သော ကမြ စာလေး တဈစောငျကွောငျ့ နှလုံးသားကှဲကွရေပါပွီ ။
ဖွူစငျရိုးသားသော ကလေးကိုမှ သူခိုးဖွဈစခေဲ့သညျ။ ဒဏျရာမြားနဲ့ အတောငျကြိုးနသေော ငှကျကလေးကိုမှ ရိုကျသတျမိခဲ့သညျ။ ကြှနျမအား ဆရာမလို့ချေါထိုကျစရာ တဈကှကျမှ မရှိတော့ပါ။သှေးစှနျးနသေော စာရှကျလေးကို တငျးတငျးဆုတျကိုငျထားနစေဉျ ကြှနျမဘေးနားကို တိုးတိုးလေးကပျ လာပွောသယောငျ ” သမီးကို ခှငျ့မလှတျပါနဲ့ သမီးမသခေငျြသေးဘူး ဆရာမရယျ ” ဟူသော အသံတှကေ ဆူညံပှတျလောကျရိုကျနပွေီး ကြောငျးသူလေးကို မကျြလုံးထဲ မွငျယောငျကာ ကတ်တရားလမျးပျေါတှငျ ကြှနျမလဲကသြှားလသေညျ။
” ဆရာမ သမီးမသခေငျြသေးဘူး ဆရာမရယျ ။ သမီးစာအုပျကို လုံးဝ မခိုးပါဘူး ။ သမီးကွောကျတယျ။ သမီးဘယျနရောရောကျနမှေနျးမသိဘူး မှောငျမဲနတောဘဲ။ ”
” သမီးရေ ဆရာမကို ခှငျ့မလှတျပါနဲ့ကှယျ။ ဆရာမ စညျးကမျးခကျြတှကေို ရှတေ့နျး တငျခဲ့မိတဲ့ အမှားကွောငျ့ သမီးကို ဘဝခွားသှားစခေဲ့ပွီ။ ဆရာမ မှားပါပွီကှယျ ။ နောကျဘဝဆိုတာ ရှိခဲ့ရငျ ဆရာမဆီပွနျလာခဲ့ပါ သမီးကနြေပျလောကျတဲ့အထိ ဒူးထောကျပွီး တောငျးပနျပါ့မယျ။”
” ဆရာမ -သမီးကို ကတိတဈခု ပေးပါ ။ ဆရာမ စာဆကျသငျပါအုံးမယျလို့ ။ ပနျးကလေးတှကေို သမီးလို အလအေလှငျ့မရှိပဲ ပွုစုပြိုးထောငျပါ့မယျလို့ ကတိပေးပါ။ ဆရာမ ကတိပေးရငျ သမီးလှတျလှတျလပျလပျနဲ့ ခရီးဆကျတော့မယျ။ ဆရာမ သမီးကို ကတိပေးမယျမလား ”
” ပေးပါတယျ သမီးရယျ ”
“သမီးသှားတော့မယျ နှုတျဆကျခဲ့ပါတယျ ဆရာမရယျ ”
” သမီး… သမီး … သမီးလေး ”
ကြှနျမအျောရငျး လနျ့နိူးလာခဲ့သညျ။ အိမျမကျထဲတှငျ သသှေားသောကြောငျးသူလေးသညျ ကြောငျးဝတျစုံလေးနှငျ့နောကျဆုံး အခြိနျထိ ကြှနျမ ကို ခှနျအား သတ်တိတှေ လာပေးသှားသညျ ။
မောဟိုကျစှာ တဈဒိတျဒိတျ ခုနျနသေော နှလုံးတို့သညျ အမပေေးသော ရတေဈခှကျကို သောကျပွီး ခဏငွိမျနတေော့သညျ။ အခုတော့ ဘဝသဈကို ပွနျစမညျ ခွလှေမျးသဈတိုငျးတှငျ လကျထဲက သှေးစှနျးနတေဲ့စာရှကျလေးက အားအငျ ပွုပေးနတေော့သညျ ။
” ဒို့ကြောငျး ”
ငါတို့ စာသငျကြောငျး ”
ကလေးမြား သံပွိုငျရှတျဆိုသော ကဗြာလေးသညျ နံနကျခငျးတှငျ ပီပွငျစှာတေးဆိုနသေော ငှကျကလေးမြားနှယျ။ ကြှနျမ ပွုံးပြျောနသေညျ ။ ရှာတဈရှာ၏ မူလတနျးစာသငျတနျးကြောငျးတှငျ ပွောငျးရှေ့ တာဝနျခခြံရသျောလညျး ကြှနျမ ထူးပွီး စောဒက တတျမနတေော့ပါ။
အခုဆို ကြှနျမဘောငျမခတျေပဲ ပနျးကလေးတှေ ပြိုးတတျလာပွီ။ ကလေးတှရေဲ့ အပွုံးကို စားသုံးရငျး တဈနှဈပွီး တဈနှဈကြျောလှနျ လာခဲ့သညျမှာ သုံးနှဈတိုငျပွညျ့တော့မညျ။ စိတျတှလေညျး အတျောပငျတညျငွိမျခဲ့သညျ။သုံးနှဈကွာခဲ့ပွီ ဆိုသျောလညျး အတိတျက ကွှလှေငျ့ခဲ့သော ပနျးလေးအကွောငျးတှေးမိတိုငျး တဈဖနျပူနှေးလာစမွဲ ။
ကြောငျးမပွောငျးရှရေ့ခငျ နောကျဆုံးသငျခဲ့ရသညျ့နတှေ့ငျ စာအုပျပြောကျလာတိုငျသော ကြောငျးသူလေးက သူ့အပွဈကို လာဝနျခံခဲ့သညျ။ သူမရဲ့ မနာလိုစိတျကွောငျ့ သခေဲ့ရသညျဟု ရှိုကျငိုရငျး ပွောရှာပါသညျ။ အတနျးထဲတှငျ လတိုငျး အဆငျ့ ၁ ရသော နှငျးနှယျအောငျ ကိုကွညျ့မရလို့ မုနျ့စားဆငျးခြိနျတှငျ နှငျးနှယျအောငျ လှယျအိတျထဲတှငျ သူမကိုယျတိုငျ သှာထညျ့ထားပွီး လုပျကွံခဲ့တာဟု ဝနျခံခဲ့သညျ။
ထောငျးထာငျး ကွနေသေောစိတျနှငျ့သာ အပွဈလုပျသော ကလေးမကို ကြောငျးစညျးမဉျြး အရ ကြောငျးထုတျ လိုကျပါသညျ။ ကြှနျမလညျး ထိုကြောငျးနှငျ့ဝေးရာကို ဇာတျမွှုပျနထေိုငျခဲ့ပါသညျ။ အခုဆို ကြှနျမပြိုးထားသော ပနျးပှငျ့ငုံလေးမြား လနျးဆနျးလြှကျ ရှငျသနျနပေါတယျ။ ကြှနျမ ရဲ့အတှေးတှေ ဖွနျ့ကကျြနစေဉျတှငျ…
” သားကို ဘုနျးဘုနျးပေးထားတဲ့ စာအုပျ
သာဂိ ခိုးထားတယျ။ ”
ကြှနျမ အာရုံတှေ စုစညျးလိုကျသညျ။ ကြှနျမ ဒီတဈခါ ကိုငျတှယျမှု မမှားခငျြတော့ပါ။ လှနျခဲ့သော နှဈနှဈကြျောလောကျက သဆေုံးသှားသောကြောငျးသူလေးအား ဖတျြခနဲ သတိရလိုကျသညျ။
ဒိုငျယာရီ စာအုပျကွားက သှေးစှနျးနသေော စာရှကျလေးကို ဖှငျ့ကွညျ့ရငျး..။
Credit: ပြူမခ (ကော့သောငျး)